SAWIRADA TARANKA EEYGA BULLDOG EE MAREYKANKA, 1 - EEYAHA
Sawirada Taranka Eeyga Bulldog ee Mareykanka, 1
'Kani waa Mareykankeyga Bulldog Monte Carlo 6 toddobaad, maalintii aan helay. Hada waa 9 bilood miisaankiisuna waa ilaa 80 rodol.! Hiwaayadda Monte waxaa ka mid ah gelitaanka wax walba, kartoonnada kartoonka, hurdada, iyo dabcan cunidda! Isagu waa hooskayga meel kasta oo aan tago, waa inuu raaco. Runtii eey daacad ah, oo jecel. '
eeyaha feestada iibka ah
Monte Carlo eey Bulldog Mareykan ah 6 toddobaad
'Marilyn waa gabar seddex jir ah oo qurux badan, 90-rodol Bulldog Mareykan ah oo leh qalbi dahab ah. Waxay ka timid khadadka Johnson / hybrid. Waxaa loogu magac daray 'haweeneydii ugu weynayd ee abid abid' Marilyn Monroe, waxay leedahay qof ka weyn shakhsiyadda nolosha oo iyada ku habboon. Marilyn waa wax kasta oo aad waligaa ka dooni karto Bulldog Mareykan ah - si fiican u dhex leh bulshada, ilaalin, adeec leh, ku weyn carruurta iyo xayawaanka oo dhan !!! '
'Tani waa Roxy. Iyadu waa gabar 7 bilood jir ah oo Mareykan ah Bulldog oo qiyaastii ah 45 rodol. Wixii aan ka arki karo waxay u muuqataa inay ka timid 'Scott' ama xariiqda waxqabadka ee Dibi Mareykanka. Iyadu waa mid aad u jilicsan oo si dhakhso leh wax u barata. Waxaan si adag u aaminsanahay falsafada hogaamiyaha Cesar Millan / xirmada Roxy-na si wanaagsan ayey uga jawaabtaa. Weligay codkayga ugama aanan qaadin iyada inay ka dhigto iyada inay adeecdo ama barato wax kasta oo ay tahay cunno iyo ammaan ay dhiirrigeliso. Roxy waxay jeceshahay inay ku ciyaarto oo ay dibedda u cararaan laakiin iyadu si firfircoon uma dhaqdhaqaaqdo oo way koolkoolisaa hal mar gudaha. Roxy waa eey cajiib ah nasiibna waan u leeyahay. Waxaan kula talin lahaa tarankaan qofkasta oo siin kara jimicsi iyo jawi qaabeysan waxay u baahan tahay inay ahaato sida ugu wanaagsan ee ay awooddo. '
Buckshot Bulldog Mareykan ah oo 1 sano jir ah, culeyskiisuna yahay 130 rodol, ayaa la seexanaya saaxiibkiis bisad - sawir waxaa iska leh seddex qori Kennel.
'Bobby Bryant iyo Ajax oo ah 11 jir Mareykan ah oo Bulldog ah. Wuxuu jecel yahay inuu aad ii ag dhawaado. Si aad u wanaagsan ayaa loola dhaqmay dadka iyo eeyaha kale. Aad ayey u fududahay in isaga lagu tababaro dhawr amar. '
'Tani waa tii iigu horreysay Bulldog Mareykan ah , Diesel iyo aniga gabi ahaanba waan jeclahay isaga! Wuxuu ahaa 9 toddobaad sawirkaan wuxuuna durbaba miisaanka u saaray 25 lbs. !! Wuxuu leeyahay dabeecad aad u kacsan. Wuxuu horeyba u qaatay Dobermans-ka buuxa ee xadiiqada eeyga ee dagaalka-dagaalka! Guriga kuma firfircoon yahay, laakiin wuxuu ku ciyaaraa banaanka iyo hareeraha eeyo kale . Faaruq wuu neceb yahay, lol. Xaqiiqdii wuxuu helaa qiyaastii 2 saacadood oo jimicsi ah maalintii (markay tahay 10 toddobaad) laakiin wuu seexdaa inta hartay ee habeenka soo socda. Wuxuu jecel yahay seddexdiisa walaalo, a Daanyeer Weyn , Chihuahua , iyo Poodle runti waxa kaliya ee uu inbadan jecelyahay waa caruurta !!
'Waxaan u maleynayaa in Diesel uu yahay canin aad isu dheellitiran. Wuu awoodaa inuu baashaalo oo uu ordo markii aan baxno, laakiin markaan guriga joogno wuu awoodaa inuu jiifsado oo uu nasto ku calaliso alaabta lagu ciyaaro . Da’yartan ayuu durbaba joogaa amarrada barashada . Waan jeclahay Cesar Millan, runtina waxaan haystaa DVD-yada. Waxaan iibsaday leashes , iwm oo uu wato Petco uu isagu sameeyay. Xadhigu runti wuxuu caawiyaa in eyda la hayo socodka saxda ah . Waxaan isku dayay cunnadiisa, waxaanan u qaadaa biyaha dhalada ku jira ee Cesar Millan ilaa beerta eyga si aanay u cabin biyaha la wadaago. Marwalba waan adeegsadaa farsamooyinkiisa, waana aniga is tababbar eeyga kahor !! ''
'Kyra Bulldog Mareykan ah 9 bilood gudahood — waxaa laga yaabaa inaan xoogaa ka baqay inaan helo Bulldog Mareykan ah wax yar ayey i cabsadeen, laakiin laga soo bilaabo maalintii aan Kyra gacmaheyga ku qabtay waxay ahayd saaxiibkeyga ugu fiican. Dabadeeda waxay ku nadiifin kartaa miiska qaxwada laba ilbidhiqsi oo siman waxayna u khuuraysaa sida tareenka xamuulka loogu maahmaaho, laakiin muuqaalka jacaylku waa mid indhaheeda ku cad oo waxa kaliya ee aad samayn kartaa tahay qosol. Waxaan had iyo jeer lahaa eeyo yar yar ama dhexdhexaad ah, laakiin runtii uma maleynayo inay weligey jiri doonaan nooc kale oo aniga ii ah!
Kyra eey Bulldog Mareykan ah oo jirta 9 toddobaad
'Artie the American Bulldog at 3 years-wuxuu jecel yahay dadka, socodka dheer, hurdada, dhabtaada, hoos u dhaca iyo lafaha dhadhanka digaaga. Nacaybkiisa ugu weyn waa roobka iyo eeyo aad u yaryar. Labadiisa saaxiib ee ugu fiican waa Shaybaarro jaalle ah oo lagu magacaabo Bruschi iyo Molly. Sideen u jeclaan karin wajigaas ????
Taangiga Boyd / Gercken, Pennhip 0.44 — sawir waxaa iska leh Boyd's American Bulldogs
Sophie oo 15-bilood jir ah (Old Southern White / Scott) American Bulldog iyadu waa NKC diiwaangashan.
Milly the American Bulldog, sawir qadarin leh D'la Perla Kennel, Miami, FL
Dion's AB Dido, qiyaastii 7 bilood
mini dachshund cocker spaniel isku dhafan
P.S.I's Ziggy iyo P.S.I.'s Johan
Hashko Bulldog Mareykan ah
Hailey the American Bulldog oo ah eey yar oo jirta 8 toddobaad
Kani waa Bud, eey yar oo saddex bilood jir ah.
Bulldoggan quruxda badan ee Mareykanka waxaa loogu magac daray Roxy.
6 bil jir bulldog Faransiiska
Macluumaadka Bulldog ee Mareykanka
Sawirada Bulldog Mareykanka 1
Sawirada Bulldog Mareykan 5
Sawirada Bulldog Mareykan 9
ceel dibi iyo isku darka bulldog american
Terry jiir madow iyo caddaan ah